Wefti uu hogaaminayo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland oo Garacad kula kulmay saraakiil Nato ah. – Radio Daljir
Wefti uu hogaaminayo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland oo Garacad kula kulmay saraakiil Nato ah.
Maarso 3, 2012 12:00 b 0
Jariban,Mar, 3 -Wefti uu hogaaminayo wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda Puntland Eng Saciid Maxamed Raage ayaa gaaray deegaanka Garacad ee gobolka Mudug.
Wasiirka dekedaha Puntland oo ku sugan degmada Jariiban ayaa u sheegay Radio Daljir socdaalkooda inuu ahaa iskaashi shacabka deegaanka Garacad, Puntland iyo Nato ay ka yeesheen la dagaalanka burcadbadeeda iyo Al-Shabaab.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay,inuu la kulmay degmada Jariiban, saraakiil katirsan Nato, maamulka degmada Jariiban iyo shacabka deegaanka Garacad,waxaana uu intaasi raaciyay inay isku afgarteen inay si wadajir ah isaga kaashadaan howlgalada lagula dagaalamayo kooxaha burcadbadeeda.
Weftiga wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ayaa waxaa ka mid ah saraakiil katirsan wasaaradda arimaha gudaha ee Puntland.
Puntland oo xirtay agaasimaha iyo idaacadda Codka Nabadda ee magaalada Boosaaso.
Baahin: Khamiis, Mar 01, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Gobolka Gedo oo ay dagaallo xoogani ka socdaan & tobaneeyo saraakiil oo ka tirsan Al-shabaab oo la laayey; Golis oo iclaamisay qiime dhimis adeegga taleefanada ee gudaha Somaliya; Waftiga dawlada federaalka ee ku sugan Baydhabo oo ka xog warramay la-kumadoodii gobolka; Qurbajoogta Puntland ee Europe oo sheegay in ay wadaan qorshe taageero ee horumarinta magaalooyinka.